Ny lymphostasan'ny rantsana ambany - fitsaboana
Ny lymphostasis dia aretina izay vokatry ny fanitsakitsahana ny lymph drainage, noho ny tsy fahampian'ny fivoahan'ny drafitra fiterahana. Ny fisehoana eo amin'ny klimika momba ny lymphostasis any amin'ny tendrony ambany dia ny fihenan'ny tongotra iray na roa. Ny aretina mandroso dia tsy azo lavina ary mitondra mankany amin'ny fananganana fibra-tavy - fanimbana lehibe ny tongotra. Ny fitsaboana ny lymphostasis any amin'ireo faribolana ambany dia tokony hataon'ny lymphologista na ny mpandala ny mahazatra, satria ny fitsaboana amin'ny tenany dia mitarika ho amin'ny fahasembanana.
Ny fitsaboana ny lymphostasis dia miara-dalana amin'ny lafiny roa:
ara-batana - ny fanesorana ny fanangonana ny lymph amin'ny alalan'ny fitaovana mahazatra;
Rehefa voatondro ny aretina, dia manasitrana fandidiana fanasan-damba manokana, izay manasitrana ny fifandonana amin'ny fantsom-bokatra, na ny pneumocompression - massage ara-batana. Izy io koa dia nampiasa fitsaboana ara-pahasalamana ny tongotra amin'ny elastic bandage - fitomboka. Tao anatin'izay taona maromaro izay, ny golf, ny kapaoty ary ny kofehy avy amin'ny fantsom-pitsaboana medikaly dia nampiasaina tamim-pahombiazana. Fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny marary mijaly amin'ny lymphostasis any amin'ny faravodilanitra ambany no novolavolaina, izay manolo-tena mba ho tantera-pahazavana fotsiny amin'ny fametrahana azy.
Fanafody fitsaboana amin'ny lymphostas amin'ny faravodilanitra ambany
Ny fiomanana amin'ny fitsaboana ny lymphostasis any amin'ny faritra afovoany dia manatsara ny fihanaky ny mikraoba amin'ny lymph. Ao amin'ny dingana voalohan'ny areti-pihetseham-po mba hialana amin'ny fangirifiriana:
capsules, tablets ary gel Venoruton, Troxevasin;
Ny fomba tsara indrindra hampiasana ny zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny lymphostasis amin'ny tendrony ambany dia ny Bioflavonoid detralex (Fleobody, Diosmin, Vasoket). Ny fitsaboana dia eo anelanelan'ny roa sy enim-bolana.
Ny glycoside saponine, izay misy ny voankazo mahavokatra voankazo, dia natao ho fototra amin'ny famokarana venotonique sy antiexudative, mahomby amin'ny lymphostasis any amin'ny faritra ambany kokoa, ny fiomanana Escin (anarana nomena anarana Venastat, Aescin, Escuzan, sns).
Ampiasaina ny diéretik (diéretik) mba hanesorana ny fluid voangona. Miaraka amin'ny aretina mifindra amin'ny aretina (erysipelas sy ny lymphangitis), dia voasoratra ny antibiotika.
Ny fitsaboana ny lymphostasis any amin'ny faravodrano ambany kokoa amin'ny fitsaboana ataon'ny olona
Ao amin'ny fitsaboana ny lymphostasis (lymphostasis) faharoa amin'ny rantsana ambany, toy ny fanampiana, dia azo ampiasaina ny fitsaboana nentim-paharazana. Mampiasa fampiasana mahazatra avy amin'ny molekiola matevina ao amin'ny vala, mifangaro miaraka amin'ny taokanton'ny tar. Ny fangaro dia ampiharina amin'ny fototra kotona, mihatra amin'ny toerana maloto, voaaro amin'ny fandevenana ary havaozina mandritra ny alina. Tokony haverina isaky ny roa volana ny fikarakarana.
Ho an'ny fitsaboana anatiny dia soso-kevitra ny famonoana tantely 350 ml ary 250 g ny tongolo lay. Mandritra ny herinandro dia atambatra ny zava-mahadomelina, amin'ny hoavy dia tokony horaisina eo ambony latabatra alohan'ny sakafo mandritra ny roa volana farafahakeliny.
Mba hanamafisana ny fitomboan'ny lymph sy ny fahasalamana ankapobeny ao amin'ny vatana dia tena ilaina tokoa ny misotro rano indroa isan'andro avy amin'ny fitaratra iray (na bottled tsy misy gazy), menaka ambony siramamy vita amin'ny vilany ary misy teopam-tantely.
Vao haingana dia lasa malaza be ny fomba fanaon'ny lymphostas taloha amin'ny alalan'ny hirudotherapy - mampihetsi-po amin'ny faritra amam-bika. Noho io karazana fitsaboana io, dia mihatsara ny fielin'ny ra sy ny lymph.
Raha tsy misy vokatra miorina amin'ny fitsaboana sarotra amin'ny lymphostasis any amin'ny tendrony ambany sy amin'ny fisehon'ny fiboza sy ny laxfatasy amin'ny tongotra malemy, dia atao ny fandidiana. Ao anatin'ny dingan'ny fidirana amin'ny serivisy, dia misy ny fialana amin'ny fihetsikan'ny lymph, izay ahafahana manatsara ny fahasalaman'ny marary amin'ny endrika aretina.
Plasmolifting - fifanoherana
Inona no fanampiana an'i Andipal Avexima?
Ahoana no ahafahan'ny olon-dehibe mandray an'i Dufalac miaraka amin'ny fikorontanana?
Andron'ny andro iray
Mahatsapa fihetseham-po amin'ny tendany
Fihetseham-po lehibe - fitsaboana
Hepatose amin'ny fetsy ny fo - fitsaboana
Mety hisy ny alèjy ho an'ny pastèque ve?
Bursitis amin'ny fiaraha-miasa ny elbow - fitsaboana
Toetry ny fo - antony
Dracaena - ny tendron'ny ravina maina, inona no tokony hatao?
Helen Mirren dia nampanantena fa ny vehivavy maloto indrindra!
Matin'ny homamiadana i Alan Rickman
Andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana
Salady Fresh Carrot
Nahoana isika no manonofy momba ny volon'ondry?
Provence Hallway - ny tsiambaratelon'ny fampiononana an-trano
Sarafans 2017 - fialantsasatra amin'ny lamaody amin'ny vanim-potoana ho avy
Cystocele amin'ny vehivavy
Famolavolana sy fomba amam-panao manokana
Fanamboarana rindrina ao an-dakozia
Kira Plastinina - biography
Royal Canin ho an'ny saka
Salady misy roapolo misy menaka voangom-bazaha
Rantsan-kovanao milomano ao anaty lafaoro
Manamboatra lakozia kely